के तपाईको दाँत अमिलो खादा कुडिने गर्छ ? कसरी निराकरण गर्ने ? जानीराखौ - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it किन हुन्छ महिलाको स्वर मसिनो र सुरिलो ? पुरुषको चाहि किन मोटो र धोद्रो ? थाहापाउनुहोस्
Up Next यार्सागुम्बा अर्थात जडीबुटीको राजा, के छ यसको उपयोगिता ? जानिराखाैँ